မိမိကိုယ်မိမိ ရိုသေဖို ့လိုတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » မိမိကိုယ်မိမိ ရိုသေဖို ့လိုတယ်
မိမိကိုယ်မိမိ ရိုသေဖို ့လိုတယ်
Posted by ေရႊအိမ္စည္ on Aug 10, 2011 in Ideas & Plans | 10 comments
ဆေးရုံတစ်ရုံမှာ ဆေးကျောင်းသားတစ်စု လူနာကိုလက်တွေ ့စတင်ထိတွေ ့ရမယ့်နေပေါ့ ။ သူတို ့တစ်တွေ လူနာ ကုတင် တစ်ခုလုံးကို ပတ်ဝိုင်းပြီး ရပ်နေကြတယ်။
ဂျူတီကုတ် ဖြူဖြူတွေ ကိုယ်စီဝတ်ထားကြပေမယ့် နားကြပ်တော့မပါကြပါဘူး ၊သူ ့တို နားကြပ်တွေကို စစ္စတာရဲ ့အခန်းထဲ ထားခဲ့ရမယ်လို ့ဆရာက မနေ ့ကမှာထားခဲ့ပါတယ်။
“ကဲ.. ဒီလူနာကိုမင်းတို ့နားထောင်ရမယ့်အကြာင်း ခွင့်တောင်းထားပြီးပြီ ၊ မင်းတို ့သူ ့နှလုံးခုန်သံကို စိတ်ကြိုက် နားထောင်လို ့ရတယ်။ နှလုံးအဆို ့ရှင်ကျဉ်းတဲ့အသံဟာ ဒီလူနာမှာသိပ်ကို ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကြားနေရတယ်။ ဒီလောက် ပီသတဲ့အသံမျိုး ရှားတယ်။’
ဆေးကျောင်းသားအားလုံးဟာ ဒီနှလုံးအဆို ့ရှင် ကျဉ်းတဲ့ နှလုံးသွေးစီးသံ နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး စာတွေ ့အားဖြင့်လေ့လာ မှတ်သားဖူးပြီးသားပါ ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ ့မှာ တစ်ခါမှ မကြားဘူးသေးဘူး။
သီအိုရီ အရပဲ ဘာသံပြီးရင် ဘာသံလာရမယ်၊ ဘယ်လိုကြားရမယ်ဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။
ဆရာက သူတို ့ကို နားကြပ် တစ်ခု ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
“ကဲ…အချိန်ယူပြီး သေသေချာချာနားထောင်ကြ၊ သိပ်ကောင်းတဲ့အသံပဲ”
ကျောင်းသားတွေလည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ဆရာ့နားကြပ်နဲ ့နားထောင်ကြပါတယ်။
့နားထောင်ရင်း ခေါင်းညိတ်ကြတယ် ။
“ဟာ…ဟုတ်တယ် ၊ ဟုတ်တယ် ၊ကြားရတယ် ၊ စာထဲကအတိုင်းပဲ ”လို ့ပထမစ နားထောင်သူက ဆိုတယ် ၊နောက်ထပ်ကျောင်းသား အားလုံးက လည်းလိုက်ပြီး အဲ ့သလိုဘဲ ပြောကြတယ်။
နှလုံးအဆို ့ရှင်ကျဉ်းတဲ ့အသံနားထောင် ပြီးတဲ့အခါ စစ္စတာရဲ ့အခန်းမှာ စာသင်ဖို ့အားလုံးပြန်စုကြ
တော့ ဆရာကမေးပါတယ် ။
“မင်းတို ့အားလုံးကြားခဲပြီလား” တဲ့ ။ကျောင်းသားအားလုံးပြိုင်တူခေါင်းညိတ်လိုက်ကြတယ်။
ဆရာကဘာမှ ဆက်မပြောပါဘူး ။ဆရာကသူတို ့ကိုပေးလိုက်တဲ့နားကြပ် ကိုယူပြီး နားကြပ်က ဝက်အူရစ်ကို ဖြေးဖြေးခြင်း လှည့်ဖွင့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အိတ်ထဲက ဇာဂနာ တစ်ချောင်းထုတ်ပြီး ့နားကြပ်ရဲ့ပိုက်တစ်လျောက်မှာ ထိုးတည့်ထားတဲ့ ဂွမ်းစတွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါ ကျောင်းသားအားလုံးဟာ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်း ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ် ။
ဘာမှ မကြားနိုင်တဲ့နားကြပ်နဲ့နားထောင်ပြီး ကြားခဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောခဲ့မိပြီ ။ ပြောတာမှ ပီပီသသကြီးကြားခဲ့ရတယ် တဲ့၊ ။
“မင်းတို့… နောက်ကို ဒီလိုဘယ်တော့မှ မဖြစ်ကြစေနဲ ့၊ ဘာမှမကြားရရင်မကြားဘူးပဲပြောပါ ။ ဟန်မဆောင်နဲ ့။ မညာနဲ ့၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်းမညာမိစေနဲ ့”၊
ဒါကတော ့အဲဒီ ဆေးကျောင်းသား တစ်စုရဲ ့ပထမဆုံးသော လူနာချည်းကပ်နည်း
ဆရာ စာမသင်ပါဘူး ၊ ဆရာသင်ပေးလိုက်တာကတော့ ………..
မြင်ရင်မြင်တဲ့ အတိုင်း ပြောပါ။
ဆေးပညာအတွက်သာမက ဘဝတစ်လျှောက်အတွက်ပါ ဒီစကား အရေးကြီးလှပါတယ်။
” မိမိကိုယ် မိမိ တို ့ရိုသေဖို ့လိုတယ်” ဆိုတာသင်ပေးလိုက်တာပါ ။
မိမိကိုယ့်မိမိရိုသေလေးစားပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ တခြားလူကကိုယ့်ကိုရိုသေလေးစားဖို့အတွက် ဉာဏ်ပညာထူးချွန်ထက်မြက်နေဖို့(သို့)နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေဖို့ (သို ့)ပညာတွေအရမ်းတတ်နေဖို ့မလိုအပ်ပါဘူး။
စာကိုး။ ။မောင်သစ်ဆင်း(ကလေးတို ့မနက်ဖြန်)
ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရိုသေပါတယ်။
မြင်ရင်မြင်တဲ့ အတိုင်း အမှန်ကိုအမှန်အတို်င်း ပြောချင်တာပေါ့ပါးစပ်ကိုယားလို့။
ပြောချင်တာပေါ့ ပြောချင်တာမှ အရမ်းရမ်းပဲ ……
အဲလို လိုက်လုပ်မယ်ဆို တာဝန်ယူပေးမှာလားဟင် ………….
အခြေခံအားဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ မလိမ်ဘို့အရေးကြီးပါတယ်။
မိမိ ကိုယ်ကို မိမိ
ဘာဖြစ်ချင်သလဲ ဆိုတာကို သိမှ
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ ကို ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်မယ့်
နည်းလမ်း ရှာဖွေ နိုင်မယ် ထင်တာပဲ
ုကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မလိမ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ သိအောင် လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်မယ်။ ပညာတတ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ့် လူသားအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးပညာနဲ့ အသက်မွေးမယ့် လူတစ်ယောက်ကို အရေးအကြီးဆုံး သင်ခန်းစာတစ်ခု သင်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ အမှန်တကယ်လဲ သင်ပေးနေကြလားမသိပေမယ့် အဲလို သင်ပေးရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ။
သူများလေးစားအောင် လုပ်ဖို့လွယ်ပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန် လေးစားအောင်လုပ်ရတာ တကယ်ခက်ပါတယ်
ငယ်ငယ်တုန်းက မှန်ကန်ခြင်းနှင့်ရဲရင့်ခြင်းဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးဖတ်ဖူးပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ သစ္စာတရားကို လက်ကိုင်ထားရင် ယုံကြည်မှုဆိုတာ ရတတ်ပါတယ်။
ကြားရင်ကြားတဲ့အတိုင်း … မြင်ရင်မြင်တဲ့အတို်င်း အမှန်တွေပဲပြောချင်တာပေါ့လို့ ။
မှန်တာပြောရင် ရွာပြင်ထွက်နေရမှာ စိုးလို့
ဒီရွာထဲမှာတော့ ပြောလို့ရတယ်လေ …. ဒါပေမဲ့ တချို့တချို့သော နေရာ တွေမှာ …..